မြန်မာ ပြည် မှာရေ ပြတ် တောက်နေသည့် ပြသာနာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိုးရိမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာ ပြည် မှာရေ ပြတ် တောက်နေသည့် ပြသာနာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိုးရိမ်
Posted by Bayote on May 13, 2010 in Myanma News, News |4comments
မြန်မာ ပြည်မှာ အလွန်ပူပြင်းလှတဲ့ ရာသီဥတု ကြောင့် မြေအောက်ရေများခန်းခြောက်ကုန်နေပါတယ် ။
သောက်သုံး ရေပြတ်တောက်မှုဒဏ်ကို ပဲခူး၊ သာယာဝတီ၊ဝေါ ၊ စစ်တောင်း တို့ ရှိ ပြည်သူများ ခံစားနေကြရပါတယ်။ ရေဝေတဲ့လုပ်ငန်းများကို ကျောင်းသားလူငယ်များက တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါတယ်။ ရေ ရရှိရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံပိုးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရေအကျိုးဆယ်ပါး – မတောင်းပဲပြည့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရေဂါလံ ၁၅၀၀ ပါတဲ့ကားတစီးကို ကျပ်ငွေ ၆ သောင်း ကျပါတယ်။ ရေလျူဒန်းလို သူများ ကျနော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
ဒေါ်သန်းသန်းအေး (NLD- LA- ဂျပန် ) – ဖုံး – 080-5373-2524
ကိုရင်ထွေး (FBF- ထိုင်း) –
ကိုမိုးသီး- +66- 084-459-1186
ကိုထွန်းအောင်ကျော်- ( 88 GSE- အမေရိကန်) –
ကိုဝင်းထွန်းညွန့်(ခ) ကိုဖက်တီး ( BCM- မလေးရှား) – ဖုံး
ကိုစိန်ဟန် ( ထိုင်း) – 081- 973-1982
ရေ က စမဲ့မီးတောက်များ
မေ လ ကုန် လို့ မှ မိုးမရွာ လျင်တော့ မြန်မာ ပြည်မှာ ရေ ပြသာနာ အကြီးအကျယ်တက်လာနိင်နေပြီ။
နအဖ နှင့်ထူးသစ်ကုမဏီတို့ ပေါင်းပြီး နစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါး သစ်တောကြီးများကို ခုတ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးသုံးခဲ့တဲ့အတွက် ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်များမှ မုန်သုံသစ်တောများ၊ ရောဝတီနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်မှာ ဒီရေရောက်သစ်တောများ လုံးဝ ပြောင်သလင်းခါသွားပါတယ်။
အကျိုးဆက်ကတော့ မိုးခေါင်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်းတွေဖြစ်လာပါတယ်။
ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်သွားတဲ့အကျိုးဆက်ကို တိုက်ရိုက်ခံစားရတဲ့သူတွေကတော့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ စားစရာမရှိတာကြာပြီ။ ခုတော့သောက်စရာရေပါမရှိတဲ့ဘ၀ ကိုဆိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
From : http://www.komoethee.blogspot.com/
မိုးလေ၀သကဥိးထွန်းလွင်ကတော့ မေလလကုန်ပိုင်းလောက်မှာမိုးမျှော်နိုင်တယ်လို့ေ၇ဒီယိုက ပြောပြောနေတာပဲ။ ဒီတစ်နှစ်ပဲအယ်နီညိုမှာတဲ့ နိုင်ငံခြားကပညာရှင်အချို့ ကတောင် နောက်နှစ်ကို လာနီညာမယ်လို့ မှန်းထားတယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့ ။ မိုးေ၇ ရွာပါတော့ လူတွေဒုက္ခေ၇ာက်လှပီ
အားလုံးမှန်ပါသည်….စိုး၇ိမ်နေလို့မပြီးသလို ..မျော်လင့်နေလို့လဲ မပြီးသေးပါဘူး….
လုပ်စရာရှိတာလုပ်မှ ဖြစ်မှာပါ…. မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ… ကန်တင်းထိုင်
အင်တာနက်မှာပွား… လိုက်ယားလိုက်ယားလုပ်နေခြင်းကို ဆင်ခြင်သင့်ပါပြီ…
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်ရေအမှတ်က ..မျိူးဆက်သစ်တက္ကသိုလ်များသာဖြစ်လာနိုင်ပါ၏….
ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ် မှ ဧပြီလကုန်ထိ ဆည်တွင်းမှ ရေတွေလုံလောက်မှုမရှိနိုင်ဟု စက်ရုံမှူးဒေါ်အေးအေးမင်းမှ ပြောကြားခဲ့သည် ဟု သိရပါသည်